Golaha Aqalka Sare oo maanta ansixiyay sharciga saxaafadda Soomaaliya+sawirro - Hargeele - Wararka Somali State
Golaha Aqalka Sare oo maanta ansixiyay sharciga saxaafadda Soomaaliya+sawirro
January 14, 2020 99
Muqdisho(SONNA) Mudanayaasha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u ansixiyay sharciga Saxaafadda Soomaaliya,kaasi oo ay hor geysay wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo dalxiiska Xukuumadda Soomaaliya.
Kulanka oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha Aqalka Sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxaa ka qeybgalay maanta wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo qaar kamid ah agaasimeyaasha waaxyaha ee wasaaradda.
Kadib dood dheer oo goluhu uu ka yeeshey sharcigaasi warbaahinta iyo sidii loo ansixin lahaa ayaa ugu dambeyntii maanta waxaa ay isku raaceen in si rasmi ah loo meel mariyo.
Sharcigan oo muhiimad gaar ah u leh warbaahinta dalka waxaa horey u soo ansixiyay xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Wajiga Labaad Ee Tira Koobka Shaqaalaha Dowladda Oo Lasoo Gabagabeeyay+Sawirro
Webiga Shabeelle oo ku fatahay degaanno ka tirsan Balcad
War laga soo saaray dhagar-qabayaal miino ay aasayeen Muqdisho kula qaraxday